Cambaarta carruurta | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Sababta dermatitis atopis
Tallaabooyin aan waxtar lahayn oo loogu talagalay dareenka atopic
Aad ayey ujirsan tahay, xoqinaysaa. Mar kale ayay soo jiidataa, xitaa waad sii xoqdaa. Ilaa ugu dambeyntii wax kasta waa uu xanuunayaa oo dhiig ku daatay. Maxay horeba u adagtahay dadka qaangaarka ah, waxay ku dhow yihiin wax aan macquul aheyn carruurta: jooji xoqista marka cuncunkan aan fiicnayn ee ku dhaca dermatitis-da.
Laakiin waa maxay cambaarta hidde ah?
Qiyaasta 15% ee dhammaan carruurta ayaa saameeya cudurkan, dadka waaweyn badiyaa way ka yaryihiin. Dermatitis-atopic - sidoo kale loo yaqaan 'atopic eczema' - waxay sameeyaan finan yaryar, oo ay weheliyaan maqaar qallalan, taas oo cuncunkeedi u dillaacday.
Sidee loo ilaaliyaa cambaarta hidde ah ee carruurta
Haddii uu cudurku jiro, waa lagu garan karaa maqaarka. Haddii ugu yaraan shuruudaha aasaasiga ah ee 3 iyo shuruudaha 3 la buuxiyo, cudurku waa hubaal. Dabcan, kiis kasta, talada xirfadle caafimaad waa in la helaa!
qodob oo waaweyn:
Cuncun xoog leh
Qeybinta caadiga ah (xusullada, jilbaha, qoorta, caloosha)
Cudurka qoyaanka ee atopic (neefta, xasaasiyadda, maqaarka atopic)
Cudurrada daba dheeraada
Dareen-celinta maqaarka oo cadaan ah halkii uu ka iman lahaa dareen-celin maqaarka ka dib markii xoqmo
Dufanka agagaarka afka
Cuncunka oo dhidid
Uma dulqaadan dharka dharka
Dermatitis oo ku wareegsan ibta ku wareegsan
Mid ka mid ah wuxuu jeclaan lahaa inuu ka fekero wakhtigan xaadirka dhammaan cudurada adduunkan - ka sarreeya dhammaan cudurrada noocaas ah ee loo yaqaan - si buuxda loo iftiimiyo. Nasiib darro dadka dhibaateysan ee dad badan maahan. Si ka duwan, tusaale ahaan, xasaasiyadaha xayawaanka ee xayawaanka oo midkood uu dhihi karo "Ilmahaagu wuxuu xasaasiyad ku leeyahay fardaha"Sababta waa in la ogaado.
Mid ka hadlaya halkan kiciyeyaasha iyo saameynta saamaynta, taas oo kicin karta xannibaad bukaanka ah. Si loo daaweeyo cudurka, ma caawineyso in la yareeyo calaamadaha, laakiin marka hore iyo ugu horreyn, sababaha waa in la xalliyaa.
Iyo liiska sababaha suurtogalka ah waa mid dheer oo adag:
Cadaadiska ama culeyska maskaxeed ee jirka (sida niyad-jabka)
Xasaasiyad nooc kasta (sida timo xayawaan, manka, boodhka guriga ama xasaasiyadda cuntada)
cimilada (tusaale ahaan qabow daran ama abaar)
Saamaynta bay'ada sida gaasaska qiiqa
Dhaqdhaqaaq xad dhaaf ah ee maqaarka
Saamaynta hormoonka sida xaamilonimada
Waxaad arki kartaa iyadoo ku saleysan tusaalooyin yar: sababaha macquulka ah waa kuwo badan. Caawinaad halkan waa "qorka DiseaseSi aad u hoggaamiso. Qor wax yar oo aad sameyso wixii aad qabatay, cunid ama aad dareentay inta lagu jiro maalmaha.
Tilmaam yar: "Xusuus qor xanuun" sidoo kale waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah cudurrada kale sida finanka. Iyadoo ku saleysan arintan, waxaa suurtagal ah in la ogaado sababta keentay sidoo kale. Tusaale ahaan waxa run ahaantii dhacay: Waa aan soo wacno qofkeena Mario. Mario marna ma dhicin finan ama finan, laakiin si lama filaan ah ayay halkaas u joogeen. Oo iyana ma ay tegin. Wax kasta oo macnaheedu yahay Mario wuxuu isku dayay, haddii daaweynta guriga awoowo, alaabooyinka caadiga ah laga soo iibsado daawada ama farmasiyada gaarka ah.
Mararka qaar Mario wuxuu bilaabay inuu xajiyo xusuus qorka, waxa uu cunay, goorta uu hawlaha uu socday iyo iyo. Falanqayntiisa dambe, wuxuu ogaaday in uu xabbadoodu ka soo kacayay kareemaha cusub subax kasta dhowr bilood. Ugu dambeyntii Mario wuu iska ilaaliyay niqiyuhu isagoo tijaabo ku jira todobaadyadii XNUM ... iyo maxaa natiijadu ahayd? Xaqiiqda, nuucyada ayaa dib loo soo celiyay ilaa ay ugu dambeyntii iska waayeen. Cunnuhu waa inuu isticmaalay qayb ka mid ah maadada Mario ee jirku uu xasaasiyad ku leeyahay, natiijadaasna, finanku waxay sameeyeen.
Sidii hore loo sharraxay, tallaabada ugu horreysa waa in la tirtiro sababta keentay si looga hortago cudurka si guul leh. Carruurta xanuunsanaya marwalba way ka xumahay, gaar ahaan haddii ilmuhu u yahay cunugiisa oo qaylinayo iyo xoqid cuncun. Si aan ugu dhicinno arrintan, waxaanu wadajir u samaynay talooyin 5 ah oo laga yaabo inay yareeyaan cuncunka, iyo sidoo kale finanku:
Maaddaama ay is barbardhigaan sida ay u socoto: ha xoqin! Inkasta oo ay horay u adag tahay dadka qaangaarka ah waxayna u badan tahay in ay ku dhowdahay inay carruurta ku dhacdo, xoqdo xanuunka waqti gaaban, laakiin markaa waxay dib ugu soo noqotaa saameyn weyn oo boomerang ah. Wareeg dhab ah
Tilmaam yar: Si looga hortago khatarta aan loo baahnayn, tusaale ahaan, habeenkii marka la seexdo, waxaa fiican in ciddiyaha laga gooyo gaaban oo gashado gacmo gashi.
Xirmooyinka shaah madow
Samee shaashado madow oo aan xaddidnayn oo u dhig meelaha ay dhibaatadu saameysey. Iyada oo la adeegsanayo fayo-dhawrka ayaa kor u qaadaya lakab ilaalin taas oo maqaarku uu lumiyo qoyaan yar (xasuuso, maqaarka engegan!) Cuncunku dib ayuu ugu soo noqdaa.
Qaboojinta joogtada ah
Iyo ugu fiican cream cream ama saliid. Tusaale ahaan, Saliida Morgan ee Morganka ah ayaa aad u fiican halkan. Saliida Argan waa saliid dabiici ah oo saliid ah, oo leh waxyaabo badan oo ka mid ah antioxidantada iyo fitamiin E, taas oo yareyneysa cuncunka waxayna siinaysaa maqaarka muhiimka ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saliida argan ...
Sidii hore loo qorey fekerka waxay noqon kartaa sabab macquul ah. Xaaladdan, jimicsiyada nasashada waxay kaa caawin kartaa kordhinta fayoobidaada, iyo, kaddibna cuncunka cuncunka.
Si habboon u qalaji iyo qalalan
Markaad qubeysid, ha biyahin biyo kulul, maaddaama ay taasi ka soo baxayso maqaarka. Ka dibna qallaji maqaarka halkii aad u jilicsanayd, dab oo leh tuwaal halkii, si looga fogaado cadaadiska aan loo baahnayn ee maqaarka. Waa muhiim muhiim halkan ka dib maqaarka si dib-u-nadiifiso iyo kareemka.
Dhirta balakoon - qaladaadka daryeelka ...
Dabeecadda saxda ah ee duufaanka carruurta
Akhrinta macnaha leh waxay ka caawisaa hawlaha xisaabta